U-TRINI LOPEZ, IMVUMI KUNYE NOMDLALI WEQONGA KWI ‘THE DIRTY DOZEN,’ USWELEKE KWI-COVID-19 ENEMINYAKA ENGAMA-83 - IINDABA
U-Trini Lopez, imvumi kunye negitare eyafumana udumo ngokwahluka kwe-Lemon Tree kwaye ukuba bendine-Hammer ngeminyaka yoo-1960 kwaye ndathatha ubuchule bayo ukuya eHollywood, ubhubhe ngoLwesibini. Wayeneminyaka engama-83.
U-Filmmaker P. David Ebersole, ogqibezele nje ukuthatha uxwebhu kwi-Lopez kunye no-Todd Hughes, uqinisekisile ukuba uLopez usweleke kwimicimbi ye-COVID-19 kwiZiko loNyango lweZonyango kwiPalm Springs, eCalifornia.
Enikwe ingcebiso nguBuddy Holly noFrank Sinatra, uLopez wajika inkwenkwezi yehlabathi ngelixa esenza ngesiNgesi nangeSpanish. Ngokungafaniyo neemvumi zaseMexico zaseMelika ezifana noRitchie Valens, uLopez wasikhaba isicelo sakhe sokutshintsha isihloko kwaye walamkela ngobundlobongela ilifa lakhe laseMexico laseMelika ngaphandle kwezilumkiso ezinokuthi zonakalise umsebenzi wakhe.
Ndanyanzelisa ukugcina isihloko sam esithi Lopez, wayalela i-Dallas Morning News ngo-2017. Ndiyazingca ngokuba yiLopez. Ndinebhongo ngokuba yiMexico.
USinatra watyikitya uLopez kwileyibhile yakhe yokuRekhoda emva kokumbona eqhuba kwiklabhu yasebusuku yaseWest Hollywood. Bajika i-pals kwaye baye baqaphela ngokudibeneyo bahlala kwizangqa zentlalo eLas Vegas nasePalm Springs, eCalifornia.
I-Lopez ibuye yongezwa kwimidlalo bhanyabhanya yesiko i-Dirty Dozen kunye nehlaya i-Phynx.
Uzalelwe uTrinidad Lopez III kubafuduki abavela eGuanajuato, eMexico, uLopez wakhulela kwindawo yaseDallas ehluphekayo eMexico. Imeko yemeko yemali yekhaya inyanzelise uLopez ukuba aphume kwisikolo samabanga aphakamileyo nasemsebenzini.
Ubomi bakhe buhlengahlengisiwe emva kokuba utata wakhe emthengele isiginci esimnyama se- $ 12 kwivenkile ethengisa iimpahla. Utata wakhe wamfundisa ukuba umntu angasidlala njani isixhobo, esikhokelele uLopez omncinci ukuba enze kwiiklabhu zasebusuku zaseDallas ezingakhange zenze abaxhasi baseMexico baseMelika.
UBuddy Holly uqaphele uLopez kwiklabhu encinci yasebusuku eWichita Falls, eTexas, wamazisa kuNorman Petty, umvelisi wamaxwebhu eClovis, eNew Mexico. UHolly wasweleka kwingozi yenqwelomoya kwiinyanga ezintandathu kamva, kwaye uLopez wamtshintsha kancinci njengemvumi ephambili yeCricket.
U-Lopez wafudukela eSouthern California wathenga igig yemihla ngemihla kwiPJ Night Club eWest Hollywood. USinatra wamqaphela ukuba aqhubeke kwaye wamnika ikhontrakthi kunye nelebheli yakhe entsha yerekhodi, Phinda ubuye, indawo leyo uLopez wathenga kuyo eyona nto ayibethileyo yokuqala ukuba bendinomntu onomthi. Yaya kwiNombolo 1 phantse kwiindawo ezingama-40 zamazwe ngamazwe.
Emva kwexesha wanceda ukuphuhlisa umtya weeGitars ezityikityiweyo zikaGibson Trini Lopez ukusukela ngo-1964 ukuya ku-1971.
U-Ebersole noHughes basandula ukugqiba ukubhala uxwebhu kwiLopez ekubhekiswe kulo njengegama lam nguLopez.
Imvelaphi U-Trini Lopez, imvumi kunye nomdlali weqonga kwi ‘The Dirty Dozen,’ usweleke kwi-COVID-19 eneminyaka engama-83
Izigaba: Amazon-Prime Hollywood Tech-Iindaba
umdala kangakanani u-claire crosby 2021
Rick kunye nodaka hulu ixesha lesi-5
ukuhamba kweenkwenkwezi iinqanawa ezinamandla
Ibhokisi emnyama yemifanekiso ichaziwe
Ngubani Cheryl scott ukuthandana